Water Proof Make Up တွေအတွက် အကောင်းဆုံး Remover ??? မိုးရာသီမှာ ရေစိုခံ မိတ်ကပ်တွေလိမ်းပြီး Remover ကောင်းကောင်းလေး ရှာနေတယ်ဆိုရင် Ketchup Bubble Makeup Remover Tissue ရှိပါတယ်။ ဖိပြီး ပွတ်ဆွဲစရာမလိုဘဲ အသာအယာ ပွတ်သပ်ပေးရုံနဲ့ ဖျက်ရခက်တဲ့ မိတ်ကပ်အားလုံးကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်လို့ မျက်နှာအသားအရေအတွက် စိတ်ချလက်ချ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 30 Sheets တစ်ထုပ် ၅၀၀၀ ကျပ် Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 100 Sheets တစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ်
ရာသီဉတု ပူအိုက်ပြီး ချွေးထွက် အဆီပြန်လို့ ဝက်ခြံတွေထွက်နေပြီလား❓ ဒါဆို Double Cleansing လုပ်ပေးသင့်ပါပြီ ? မျက်နှာမသစ်ခင် Ketchup Bubble Makeup Cleansing Tissue နဲ့ မျက်နှာကို အရင်သန့်ရှင်းပေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာလှလှလေး ဝက်ခြံတွေကင်းဝေးမှာ အသေအချာပဲပေါ့ Tissue မှာ နူးညံ့တဲ့ အမြှုပ်လေးတွေက အညစ်အကြေးတွေကို လွယ်ကူစွာဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ❤️ Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 30 Sheets တစ်ထုပ် ၅၀၀၀ ကျပ် ❤️ Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 100 Sheets တစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ်
ဖျက်ရခက်တဲ့ မိတ်ကပ်တွေလား? Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue ရှိတယ်လေ Tissue ဖြင့် မျက်နှာအရေပြားကို ဖိပြီး ပွတ်ဆွဲစရာမလိုဘဲ အသာအယာ ပွတ်သပ်ပေးရုံနဲ့ မိတ်ကပ်များအားလုံးကို သန့်စင်ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရေပြားအရေးအကြောင်းဖြစ်လာမှာကို ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ❤️ Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 30 Sheets တစ်ထုပ် ၅၀၀၀ ကျပ် ❤️ Ketchup Bubble Makeup Cleaning Tissue 100 Sheets တစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ထူးမြတ်လှသော ဝါဆိုလပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့တွင် မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ???
မိတ်ကပ်လိမ်းပြီး သေချာမဖျက်ရင် အသားအရေ ထိုင်းမှိုင်းလာမယ်. အဆီဖုတွေပေါက်မယ်. အိုမင်းရင့်ရော်လာမယ်. ဒီလို ဆိုးကျိုးတွေ ဖယ်ရှားဖို့က Ketchup Makeup Remover Bubble Tissue လေးပဲ လိုပါတယ်. နိုင်ငံကျော် မိတ်ကပ် Artist ခင်စန်း၀င်း ကိုယ်တိုင် ကြိုက်လွန်းလို့ ကြော်ငြာရိုက်ပေးထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသော Makeup Remover Tissue. Ketchup Makeup Remover Tissue အရွက် ၁၀၀ ပါအထုပ်ကြီးတစ်ထုပ် ၁၂၀၀၀ ကျပ်.